Ny fiorenan'ny maha-mpisorona be ny Tompo
"1 Fa io Melkizedeka io, izay mpanjakan’i Salema sy mpisoron’Andriamanitra Avo Indrindra, ilay nitsena an’i Abrahama, rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitso-drano azy, 2 sady nomen’i Abrahama ny ampahafolon’ny zavatra rehetra aza (voalohany, raha adika ny anarany, dia Mpanjakan’ny fahamarinana, dia vao Mpanjakan’i Salema koa, izany hoe: Mpanjakan’ny fiadanana; 3 tsy manan-dray, tsy manan-dreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan’andro na faran’ny fiainana, fa natao tahaka ny Zanak’Andriamanitra),- izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. 4 Ary hevero ny halehiben’io lehilahy io -, izay nomen’i Abrahama patriarka ny ampahafolon’izay tsara tamin’ny zavatra nobaboina. 5 Ary izay avy tamin’ny taranak’i Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolon-karena amin’ny olona araka ny lalàna, dia amin’ny rahalahiny izany, na dia teraky ny kibon’i Abrahama aza ireny; 6 nefa izay tsy isan’ny firazanan’ireo akory no nandray ny fahafolon-karena tamin’i Abrahama sy nitso-drano ilay nanana ny teny fikasana. 7 Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tso-drano amin’ny lehibe noho ny tenany. 8 Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. 9 Ary toa azo lazaina fa Levy aza, izay mandray ny fahafolon-karena, dia mba nandoa ny fahafolon-karena koa tao anatin’i Abrahama, 10 satria mbola tao an-kibon-drainy ihany izy tamin’ny nitsenan’i Melkizedeka an’i Abrahama. 11 Koa raha nisy fanatanterahana tamin’ny fisoronan’i Levy (fa tamin’izany no nahazoan’ny olona ny lalàna), ahoana no mbola ilana mpisorona hafa hiseho araka ny fanaon’i Melkizedeka ihany, izay tsy hotononina ho araka ny fanaon’i Arona? 12 Fa raha ovana ny fisoronana, dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. 13 Fa Izay nolazaina amin’izany teny izany dia avy tamin’ny firenena hafa, izay tsy nisy olona manompo eo amin’ny alitara. 14 Fa hita marimarina fa avy tamin’ny Joda no nisehoan’ny Tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain’i Mosesy akory ny amin’izay ho mpisorona." Hebreo 7:1-14
Iza moa Melkizedeka? Ny filazàna fa tsy manana tantaram-pirazanana izy (3) dia tsy midika akory fa tsy nateraka toy ny olombelona rehetra izy. Tsy mba nisy razambeny nandovany ny fisoronana fa tonga dia voasoratra ho mpisorona tsotra izao fotsiny izy (jereo ny olan’ny mpisorona tsy nanana tantara-pirazanany Nehemia 7:63-64).
Hevero ny halehiben’i Melkizedeka (4). Tsy azo noraisina ho mpisorona tokoa i Jesosy Kristy raha ny foko nihaviany no zohina (taranak’i Joda Izy: 13, 14), ka tsy ho afaka niditra ny fitoerana masina indrindra (ny lanitra: Hebreo 5:14) nitondra ny ràn’ny fanavotana mandrakizay (Hebreo 9:24-26). Saingy tsy mpisorona araka ny napetraky ny lalàna – taranak’i Arona – no maha-mpisorona Azy fa araka ny “fanaon’i Melkizedeka”. Lehibe lavitra noho i Arona i Melkizedeka noho izany satria izy (Arona) dia nitsodrano (1b) an’i Abrahama (ny lehibe no mitsodrano ny kely: 7) razamben’i Arona sy nandray ny fahafolonkarena taminy (5-6).
Iza no manahaka an’iza? Melkizedeka dia natao tahaka ny Zanak’Andriamanitra kanefa ny Zanak’Andriamanitra koa dia natao mpisorona araka ny fanaon’i Melkizedeka. Ity farany dia sady mpisorona no mpanjakan’ny fahamarinana sy fiadanana (2). Jesosy koaanefa dia sady mpisoronasy Mpanjaka marina (Salamo 45:6-7) no Andrian’ny fiadanana (Isaia 9:5-6). Azo heverina ho tahaka an’i Jaona ihany i Melkizedeka: mpisavalàlana ny Tompo izy fa ilay Zanak’Andriamanitra izay efa hatrizay hatrizay no efa talohan’izy rehetra : Ilay “avy ao aoriako [no] efa…talohako” (Jaona 1:30).